हुँदा हुँदा हजारको नोटमा रहेकाे हात्ती पनि अर्कै देशकाे ? – Articles Nepal
हुँदा हुँदा हजारको नोटमा रहेकाे हात्ती पनि अर्कै देशकाे ?
Articles Nepal September 19, 2019 0
काठमाडौं । हजारको नोट अर्थात सजिलो भाषामा ‘हात्ती’। तर, यसको त्यही हात्तीमाथि प्र’श्न उठेकाे छ, के यो नेपाली नै हो त? भनेर । तर प्र’माण दिने कोही निस्किएको छैन।
बरु होइन भन्ने आधार देखाउने धेरै छन। वि’वाद बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरक्षित उपाय निकालेर हात्ती नै फे’रिदिने। अब नेपालमै जन्मिएका जुम्ल्याहा हात्ती राम लक्ष्मणको पोट्रेट तस्बिर छापिएका हजारका नोट अर्को दसैंसम्म आइसक्नेछन्।
त्यसको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ती हात्ती चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको खोरसो हात्तीसारमा ८ वर्षअघि जन्मिएका हुन्। अहिले नोटमा छापिएको हात्तीलाई भने केही व्यक्तिले अ’फ्रिकी भनेका छन्।
हात्तीकै विषयमा विद्यावारिधी गरेका नरेन्द्र प्रधान भने यसलाई एसियाली ठान्छन्। यही वि’वाद सल्टाउन हात्ती नै फे’र्न लागिएकाे समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ।
Previous Post: नेपाल आइडल रवि ओडको नयाँ गीत सार्वजनिक – भिडियाे
Next Post: भ्रष्टाचारीलाई गाे’ली ठाे’किदिन फिलिपिनि राष्ट्रपतिकाे आग्रह